हनी वजन घटाने को लागि लपेटो
स्वास्थ्य नियमहरू द्वारा वजन कम गर्नुहोस्
लामो समयदेखि प्रियलाई स्वास्थ्य र सौन्दर्यको एल्सेक्सिर भनिन्छ र यदि तपाई यसको संरचनामा हेर्नुहुन्छ भने सबै आश्चर्यहरू गुजरिरहेका छन्। सबै पछि, महोदयले मात्र विटामिनको एक सेट समावेश गर्दैन, यसमा एंजाइमहरू, एन्टिओक्सिडेंटहरू, माइक्रो-र म्याक तत्वहरू, एसिडहरू छन्। त्यहाँ केहि अलौकिक छैन, सबै समय र मान्छे को सबैभन्दा प्रसिद्ध सुन्दरतामा, उनी प्रकृति को यो उपहार को सम्मानित गर्दछ र सक्रियतापूर्वक मानवता को मजबूत आध्यात्मिक मा शक्ति को लागि प्रयोग गरे। आज हामी मानेको हानि, प्रयोगको लागि संकेत, विविधता र, अलार्म, विनाशकहरु को लागि मधु लपेट को बारे मा कुरा गर्नेछन्।
सेलुलरहरू सेलुलाइट विरुद्ध लड्न सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, तर नतिजा देखापरेपछि, प्रश्न उठ्यो कि महान् लपेटोले वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ कि। यो उल्लेख गरिएको थियो कि प्रत्येक प्रक्रियाको साथ शरीरको मात्रा धेरै सेन्टिमिटरले घटाउँछ। त्यहाँ दुई व्याख्याहरू छन्: या तो शहदले कम चर्को जलाइदिन्छ, वा केवल पानीको कम मात्रामा जम्मा हुन्छ। दुवै कि, र अर्को, यो सेलुलिसमा र धेरै पतली र छाला कायाकल्पको लागि धेरै उपयोगी छ। पारम्परिक खाद्य फिलिम प्रयोग गरी अहिले शरीरमा वरिपरि गरिन्छ । लिपिको लागि धेरै नियमहरू छन्:
छाला तातो हुनुपर्छ: स्नान, स्नान वा स्नान।
छाला पूरै सफा हुनुपर्छ। लपेट गर्नु अघि पिकिंग वा स्क्रब प्रयोग गर्नुहोस्।
फिल्मको चौडाइ 30-35 सेन्टिमिटर छ, कमरबाट लपेट्न, बायाँ पैदल तिर जान्छ, त्यसपछि कमरमा फर्कनुहोस् र दाँया पट्टि लपेटो।
तपाईंले फिल्मको साथमा धेरै अनुहारहरू निचोर्न हुँदैन, किनकि सर्कललाई खतराको खतरामा खतरा छ।
हनी पानीको पानीमा कोठाको तापमानमा गरम हुन्छ!
पहिलो लपेट पछि, तपाईंलाई थाहा छ कि छाला धेरै अधिक लोचदार भएको छ, ओमेमामा हटाइएको छ, रंग सुधार भएको छ, र विशेषता मख्ख पर्खिएको छ।
सरसफाईको लागि भेडाको लागि हामी 2: 1 को अनुपातमा शहद र सरसफाइ पाउडर पाउछौं, जब पाउडर पहिला पानी संग चिसो पर्छ। सबकुछ समानतासँग मिश्रण गर्नुहोस् र छालाको लागी लागू गर्नुहोस्। राम्रो हिड-अपको लागि हिड्न वा अभ्यासको लागि यो उपयोगी छ।
तपाईं आवश्यक तेलहरूको साथमा एक प्यारी रैप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ एक सावधानी हो: तेलको साथ एक छड़ी लाई अधिकृत नगर्नुहोस्, ठूलो मात्रा मा तिनीहरूले छाला जलाउन सक्छन्।5चम्मचमा। हनी हामी आवश्यक तेल को3बूँद ले, सबै चौंकाने वाला या खट्टे को सबै भन्दा राम्रो। मिश्रण र लागू गर्नुहोस्।
चयापचय प्रक्रियाहरू र घट्दो रक्तचापमा महोदया महोदया लाल मिर्च संग लपेटो। यो गर्न को लागी, हामीले लाल रातो मिर्चको खाँचो पर्छ। l।5चम्मचमा l। प्रिय। हामी सबैलाई हलचल गरौं, हामी यसलाई राख्दछौं र एक घण्टाको लागि न्यानो कपडामा बस्न लाग्यौं।
स्नान वा सौना मा हाम्रो छाला पोषक तत्वहरूलाई अवशोषित गर्नको लागि सबै भन्दा अधिक संवेदनशील हुन्छ, जस्तै पोर्से सफा र खोलिएको हुन्छ, शरीर को तापमान बढेको छ, यसको अर्थ यो पेट, ह्याट्रिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको लागि यो सबैभन्दा अनुकूल समय हो। लपेट गर्न धन्यवाद, तपाईं केवल प्रभावी रूपमा सेल्युलाईटको साथ सामना गर्न सक्नुहुन्न, तर धेरै उल्ट खिच्ने अंकहरू पनि छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ। स्नानमा हनी लपेटो अन्तिम कल गर्नु अघि गर्नु पर्छ, यो: तपाईं 10-15 मिनेटको लागि स्नान जान, आराम गर्न जानुहुन्छ, चाय पी र फेरि आउनुहोस्। त्यसोभए4पटक। तेस्रो निकास पछि, लपेटो महोदया, ड्रेसिंग रूममा 15-20 मिनेटको लागि बस्नुहोस्, फिल्म हटाउनुहोस्, स्नानको भित्र धो र स्नानमा फर्कनुहोस्। हनी लपेटले मद्दत गरिरहेको छ वा छैन भने, तपाइँ निश्चित रूपमा पहिलो प्रक्रिया पछि हेर्नुहुनेछ।
शहद वा अन्य घटक प्रक्रियाहरू एलर्जी।
जिमनास्टिक वजन घटाने को लागि
शरीरको कटौतीको लागि शरीर सफा गर्नुहोस्
प्रभावी आहार को गोलियाँ "Orsoten"
कसरी वजन कम गर्न "तरल अखरोट" लिने?
वजन घटानेको लागि आवश्यक तेल
कुन औषधीले वजन कम गर्न मद्दत गर्छ?
अदरकको साथ ग्रीन कफी: समीक्षाहरू
वजन घटाने को लागि टीका क्लीनिंग
शरीर मास सूचकांक कसरी गणना गर्ने?
फैट जलाइएको ट्याबलेट
वजन घटाने को लागि रस्सी
माटो तेलको वजन घटानेको लागि
नयाँ वर्षको लागि कुखुराको शिल्प
योगको लागि मोजाहरू
चिकन संग सरल सलाद
हरियो को लागि पनीर पनीर देखि स्वादिष्ट मिठाई को केक - व्यंजनहरु!
के पहेंलो स्यान्डल लगाउने?
तपाईंको खुट्टामा रातो बत्तीबाट छुटकारा पाउन कसरी?
सब्जी सूप चिकन भाइरस संग
मेकअप कलाकारले अप्टिकल धारणाको रूपमा मेकअप गर्दछ, जसबाट तपाईंले चक्कर महसुस गर्नुहुनेछ!
Daugavpils - पर्यटक आकर्षण
पति र पत्नीको जिम्मेवारी
लेवारा - बीउ बाट बढ्दै
भान्साको भान्साको डिजाइन - विभिन्न शैलियोंको डिजाइनको लागि नियम
शीतकालीन टमाटरमा टमाटर - व्यञ्जनहरु
अझ राम्रो जीवनको लागि कसरी परिवर्तन गर्ने?
इस्त्री बोर्डको लागि आवरण
मंग कसरी छनौट गर्ने?
कला नाखून चित्रकारी